Waraysiga Musharax (Maxamuud Axmed Nuur) – Codka Qaranka Tanadland
Waraysiga weriye (Maxamuud Nuur Wardheere) uu la yeeshay musharax (Maxamuud Axmed Nuur).
Weriye (Maxamuud Nuur Wardheere) oo nin ganacsade iyo weriyaba ah ayaa wuxuu waraysi xiisobadan la yeeshay, aqoonyahan soomaaliyeed oo u sharaxan in uu ka mid noqdo golaha degaanka ee magaalada (Minneapolis). Nin kaasina waa nin aqoonyahan ah oo aad u fir-fircoon kana mid ah bulshada soomaaliyeed dadka labeenta u ah.
Sida la’iisheegay magaalada (Minneapolis) soomaalida ku nool sanooyinkaan danbe sumacaddii lagu yiqiiney hoos ayey u dhacday. Sadexdii sanaddood ee ugu danbeysey waxaa magaalada ka abuurmay, dhalinyaro qaab beeleed u abaabulan oo islaaya. Waxaana labadii sanaddood ee ina dhaafay magaalada (Minneapolis) lagu diley dhalinyaro aad u tiro badan. Arinta ku saabsan wiilasha soomaaliyeed ee dugaaga noqday oo is ugaarsanaya, waa arin ceeb iyo sharafdhac ku ah soomaalida. Sababta oo ah soomaalida waxaa ka soo dhexbaxay dad waxmatareyaal ah oo inay wax qaribaan ama ay isdilaan maahane, haba yaraatee wax wanaagsan aan bulshadooda ku soo kordhin karin. Taasoo ah wax laga xumaado oo sumcadxumo iyo ceeb weyn umadda soomaaliyeed ku ah.
Jaale (Maxamuud Axmed Nuur) waxaa kaloo waraysi ka qaaday taleefishinka (Somali TV Minnesota). Waxaana waraystay weriye (C/xakiin Bedri Maxamed).
Sida la ii sheegay magaalada (Minneapolis) soomaalida ku nool sanooyinkaan danbe sumacaddii lagu yiqiiney hoos ayey u dhacday. Sadexdii sanaddood ee ugu danbeysey waxaa magaalada ka abuurmay dhalinyaro qaab beeleed u abaabulan oo islaaya. Waxaana labadii sanaddood ee ina dhaafay magaalada (Minneapolis) lagu diley dhalinyaro aad u tiro badan.
Arinta ku saabsan dhalinyarada soomaaliyeed ee dugaaga noqday ay isku ugaarsadaan waa arin sharafdhac iyo wejixumo ku ah soomaalida. Sababta oo ah soomaalida waxaa ka soo dhexbaxay dad waxmatareyaal ah oo inay wax qaribaan ama ay isdilaan maahane, haba yaraatee wax wanaagsan aan bulshadooda ku soo kordhin karin. Taasoo ah wax laga xumaado oo ceeb iyo sharafdhac weyn soomaalida ku ah.
Bulshada kale ee ay la deganyihiin iyo warbaahintuna waa ay ogaadeen iintaas xun ee ay soomaalidu yeelatay dhawaanahan. Oo ilaa iyo in mudaaba ay soomaalidu xalka u la’ayd. Xal u helidda ubadka soomaaliyeed ee baadiyoobey, dabeedna sidii duurjoogta iscunaaya oo
waxmatareyaasha noqday waa in xal deg-deg ah loo helaa.
Xal kaasina wuxuu ka imaankaraa wakiilo indheergarad ah oo wakiil uga ah soomaalida maamulka magaalada (Minneapolis). Maamulka magaalada iyo bulshada soomaaliyeed oo wada jira, markaas waxaa suuragal u noqonaysa wax kasta oo bulshada caqabad ku ah inay xal u helaan. Sidaas lacal’adligeed danta guud ee soomaalidu waxay ku jirtaa in soomaalida degan xaafadda (60B), Ay maalinta doorashadda u codeeyaan mudane Musharax (Maxamuud Axmed Nuur).